Arsenal, Liverpool iyo Man City oo isku heysta xidig 19 jir ah oo u ciyaara Crystal Palace. - Caasimada Online
Home Warar Arsenal, Liverpool iyo Man City oo isku heysta xidig 19 jir ah...
Arsenal, Liverpool iyo Man City oo isku heysta xidig 19 jir ah oo u ciyaara Crystal Palace.
Kooxaha ka ciyaara horyaalka Barclays Premier League Liverpool iyi Manchester City ayaa hugaanka u haaya loolanka loogu jiro da’yarka garabka uga ciyaara kooxda Crystal Palace ee Wilfried Zaha, sida ay ogaatay shabakada Goal.com.
Kooxaha ugu waa weyn horyaalka England ayaa diiwaan gashaday 19 jirkaan tayada leh waxayna sugayaan inay usoo bandhigaan xiisahoodu ku aadan.
Arsenal ayaa sidoo kale dooneysa inay u xaluulato xidiga ka mid ah Under-21 xulka Ingiriiska, laakiin sida ay ogaatay Goal.com kooxda Gunners ayaa xidigaan u tixgelineysa miisaaniyad yar maadaama ay kasoo kexeysaneyso koox ka ciyaarta horyaalka hoose.
Zaha ayaa fure u ahaa kooxdiisa tan iyo markii uu 17 jirsaday wuxuuna ku hugaamiyey afar guul oo isku xigta, isagoona dhaliyey min laba gool labadiisii ciyaarood ee u dambeysay.
Arsenal ayaa xidigaan u aragta bedelka xidiga gadoodka ah ee Theo Walcott, halka Liverpool ay dooneyso inay ku dhisto baahideeda mustaqbalka weerarka Fog, Sky Blue ayaana ah koox uu saameynku yeeshay kuraygaani.
Palace, ayaana laga yaabaa inay madaxiisa dul dhigto aduun dhan 12.5 milyan oo euro, maadaama uu yahay xidig wax tar miiran ah.